Ikhaya » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zaseKazakhstan zokuhamba » I-Kazakhstan isungula i-app entsha ye-COVID yokuhamba ngaphakathi kwe-Eurasian Economic Union
UPhuhliso lweDijithali yaseKazakhstan, ubuGcisa, kunye noMphathiswa weShishini leAerospace uBagdat Musin
Inkqubo entsha yokuhamba yaseKazakhstan yenzelwe ukuba isebenze ngaphakathi kwe-European Union Union (EAEU).
'Ukuhamba ngaphandle kwe-COVID' yedijithali yaziswa eKazakhstan
Uhlelo lokusebenza luzakwaziswa eKazakhstan kwiveki ezayo
Akukho lwazi kwiiapps ezivumela iKazakhstanis ukuba ityelele amazwe angaphaya kwe-EAEU
Uphuhliso lwedijithali loPhuhliso lwaseKazakhstan, ubuGcisa, kunye noMphathiswa wezoShishino lweAerospace babhengeze ukuba abakhenkethi baseKazakh kungekudala bazokusebenzisa i-app entsha 'yokuhamba ngaphandle kwe-COVID'.
Ngokwomphathiswa, le app intsha yokuhamba yayilelwe ukuba isebenze ngaphakathi Umanyano lwezoqoqosho lwase-Eurasian (EAEU) amazwe anamanye amazwe asele ehlanganisiwe ukuza kuthi ga ngoku.
Umphathiswa ubhengeze ukuba le app izakwaziswa eKazakhstan kwiveki ezayo ukuqinisekisa ukuba abantu bangaya kumazwe e-EAEU ngokulula.
Umphathiswa uthe akukho lwazi kwiiapps ezivumela iKazakhstanis ukuba ityelele amazwe angaphaya kwe-EAEU.
Umphathiswa ukhumbuze abahambi ngepasipoti yokugonya ekhoyo kwi-eGov mobile, enokuprintwa ukuba iceliwe ngoonozakuzaku. Umphathiswa wongeze ukuba i-IATA iyawusebenza lo mbandela.
I-Eurasian Union Union (EAEU) yimanyano yezoqoqosho yamazwe akwiMpuma Yurophu, eNtshona Asia, nase-Asia eseMbindini. Isivumelwano seManyano yezoqoqosho yase-Eurasian satyikitywa ngomhla we-29 kuCanzibe ngowama-2014 ziinkokheli zaseBelarus, eKazakhstan naseRashiya, saza saqalisa ukusebenza nge-1 Januwari 2015.